🥇 2022 တွင် စတော့များကို အတိုချုံးနည်း - အရောင်းအ၀ယ်အဆုံးစွန်သော ဇွန်လ 2022 ကို လေ့လာပါ
The Big Short ဇာတ်ကားကိုမင်းကြည့်ကောင်းမြင်ဖူးပါလိမ့်မယ်။ Michael Burry ဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာအမေရိကန်စီးပွားရေးအဆောက်အအုံပြိုကျမှုမတိုင်ခင်အမေရိကန်စီးပွားရေးအဆောက်အအုံကိုတိုတောင်းပြီးဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာလှူဒါန်းခဲ့တယ်။ သို့သော်သင်တိုတောင်းသောအရောင်းရဆုံးသည်ဘတ်ဂျက်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ် မူတည်၍ ကုန်သည်များအားလုံးအတွက်ရရှိနိုင်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းသင်သိပါသလား။
ဒီလမ်းညွှန်ထဲမှာ၊ ၂၀၂၀ မှာစတော့ရှယ်ယာတွေကိုဘယ်လိုတိုတောင်းရမယ်ဆိုတဲ့နည်းနဲ့သင်လမ်းလျှောက်သွားမယ်။
စတင်ရန်တိုတောင်းသောအရောင်းအဝယ်နှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံ၏အတွင်းနှင့်အပြင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးပါမည်။ ပြီးနောက်၊ တိုတောင်းသောရောင်းအားမှအမြတ်ရရန်သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏နေအိမ်၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှသိုလှောင်မှုတိုတောင်းရန်လိုအပ်သည့်အဆင့်များကိုပြသပါမည်။
Short Selling ဆိုတာဘာလဲ? Short Going ၏အဓိပ္ပါယ်
ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် 'တိုတိုသွားခြင်း' သို့မဟုတ် 'တိုတောင်းသောရောင်းခြင်း' သည်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကျသွားလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရရင်ရှယ်ယာတွေကိုရိုးရာအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဝယ်တာထက်တန်ဖိုးကတိုးလာလိမ့်မယ်လို့သင်ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ဟာအမှန်တကယ်မှာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ငွေရေးကြေးရေးအရလုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။
ဥပမာအနေဖြင့်ဆိုပါစို့၊ ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၄၂၀ ဖြင့်တက်စလာ၏ရှယ်ယာများသည်အလွန်အမင်းတန်ဖိုးကြီးနေသည်ဟုသင်ထင်သည်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သောအရစ်ကျအိမ်တစ်လုံးကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤယူဆချက်မှသင်အကျိုးမရနိုင်ပါ။
သို့သော်အွန်လိုင်းသုံးခြင်းဖြင့် CFD ကုန်သွယ် ပလပ်ဖောင်း၊ သင်ရောင်းရန်အမှာစာတင်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Tesla စတော့ရှယ်ယာများ တန်ဖိုးကျသွားပါက သင်သည် အမြတ်ရလိမ့်မည် ဟု ဆိုလိုသည်။ စိတ်မပူပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှုပ်ထွေးမှုများကို ရှင်းပြပါသည်။ CFD နောက်ပိုင်းမှာ အမှာစာတွေ အများကြီး အသေးစိတ်ရောင်းရတယ်။
အတိုချုံးရောင်းချခြင်းကို စတော့များအတွက်သာ သီးသန့်ထားရှိကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ ဘယ်မှာကြည့်ရမယ်ဆိုတာ သိရင် Asset class နဲ့ပတ်သတ်ပြီး တိုတိုတုတ်တုတ်ပါပဲ။ ဒီအထဲမှာတေကြ ညွှန်းကိန်း နှင့် ETFs အတိုးနှုန်းနှင့် ရှေ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒီတိုတောင်းသောစတော့ရှယ်ယာလမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားသောအခြေခံမူအားလုံးသည်ဘဏ္instrumentsာရေးဆိုင်ရာကိရိယာအားလုံးအတွက်အမြဲတမ်းရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
Learn2Trade မှလေ့လာချက်များအရဘဏ္topicာရေးခေါင်းစဉ်၏လက်တွေ့ကျသောဥပမာများသည်မြူခိုးကိုရှင်းထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုတောင်းသောအရောင်းအ ၀ ယ်များ၏အခြေခံဥပမာအချို့ကိုတင်ပြသွားပါမည်။
ဥပမာ ၁ - IBM Stocks ကိုအတိုချုံးလိုက်ခြင်း
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ၊ သင်က IBM ရဲ့စတော့ရှယ်ယာတွေစျေးကြီးနေတယ်လို့သင်ယုံကြည်တယ်။
စာရေးနေစဉ် IBM စတော့များသည် တစ်ခုလျှင် $110 တန်ကြေးရှိသည်။
သင့်ရှယ်ယာစုစုပေါင်းကို $10 ယူပြီး စတော့ 1,100 ခုကို အတိုချုံးရောင်းချရန် သင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်၊ IBM ရှယ်ယာများသည် $990 တန်ကြေးရှိပြီး 10% ကျဆင်းသွားသည်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
မင်းရဲ့ အမြတ်ငွေတွေနဲ့ ကျေနပ်နေတော့ မင်းရာထူးကို ငွေထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
စုစုပေါင်းရှယ်ယာ $1,110 တွင် - သင်သည် $110 (10%) အမြတ်ရခဲ့သည်။
သာဓက ၂ - ဖေ့စ်ဘွတ်စတော့အိတ်ချိန်းကိုဖြတ်ကျော်ခြင်း
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ Facebook ဟာသင်ရဲ့စတော့ရှယ်ယာတွေဟာရေတိုအကျဘက်ကို ဦး တည်နေလိမ့်မယ်လို့သင်ယုံကြည်တယ်။
စာရေးချိန်၌ Facebook စတော့များသည် တစ်ခုလျှင် $277 တန်ကြေးရှိသည်။
သင့်ရှယ်ယာစုစုပေါင်းကို $50 ယူပြီး စတော့ 13,850 ခုကို အတိုချုံးရောင်းချရန် သင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Facebook ရှယ်ယာများသည် $263.15 တန်ကြေးရှိပြီး 5% ကျဆင်းသွားသည်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
စုစုပေါင်းရှယ်ယာ $13,850 တွင် - သင်သည် $692.50 (5%) အမြတ်ရခဲ့သည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရစတော့ရှယ်ယာများကိုသင်တိုတောင်းနိုင်သည့်နည်းနှစ်နည်းရှိသည်။ ၎င်းသည်အရောင်းအ ၀ ယ်အိမ်တစ်ခုမှစတော့ရှယ်ယာများအား 'ချေးယူ' ခြင်း၊ ဖြောင့်ဖြောင့်ရောင်းချခြင်း၊ ပြန်. ပွဲစားထံသို့, ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတွင်နေ့စွဲမှာပြန်ပွဲစားထံမှရှယ်ယာဝယ်ယူ။
ပြီးရင် CFDs ကနေတဆင့်ရှယ်ယာတွေကိုတိုတိုတုတ်တုတ်နည်းနည်းနဲ့အသစ်ပြန်လုပ်မယ်။ ၎င်းသည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုစရိတ်စကသက်သာပြီးအဆင်ပြေစွာရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသော CFD ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအများစုသည်သင့်အားကော်မရှင်မလိုအပ်သောစတော့များကိုတိုစေနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မသွားခင် CFD ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ဒီဟာကအွန်လိုင်းပေါ်မှာစတော့ရှယ်ယာတွေကိုတိုအောင်လုပ်ဖို့အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းပဲ။
CFDs (စာချုပ်များအတွက်-ကွဲပြားမှုများ) သည် အွန်လိုင်းတွင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်သော ငွေကြေးကိရိယာများဖြစ်သည်။ တူရိယာကိုယ်နှိုက်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုမှ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည်။ ယင်းအစား၊ ၎င်းသည် ယင်းပစ္စည်း၏စျေးနှုန်းကို 'ခြေရာခံခြင်း' ဖြင့် တာဝန်ပေးရုံမျှသာဖြစ်သည်။ ဥပမာဆိုပါစို့ ဒစ္စနေး ရှယ်ယာများကို နယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်း (NYSE) တွင် ဒေါ်လာ ၁၂၄.၀၆ ဖြင့် ပေါက်ဈေးရှိသည်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်သင်ရွေးချယ်ထားသည့် CFD ပွဲစားသည်ဒစ္စနေးရှယ်ယာစျေးနှုန်းကိုတူညီသောစျေးနှုန်းဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်။ ထို့နောက် Disney ၏ရှယ်ယာများသည်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဒေါ်လာ ၁၂၄.၇၆ အထိတိုးလာပါက CFD ကဲ့သို့ပင်။
သင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သကဲ့သို့ CFD များသည် real-time စျေးနှုန်းကိုသာခြေရာခံသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်သင့်အားထောင်ပေါင်းများစွာသောစျေးကွက်များသို့သင့်ကိုဆက်သွယ်ခွင့်ပေးသည်။ ၎င်းသာမက CFD များသည်သင်လိုချင်သောစျေးကွက်ကိုစျေးသက်သက်သာသာနှင့်သင်သြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။
ကောင်းပြီ, CFDs ၏အပိုဆောင်းအားသာချက်တစ်ခုအမြဲတမ်းသင်တစ် ဦး ဝယ်အမိန့်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်အမိန့်ထားရှိခြင်း၏ option ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ၀ ယ်ရန်အမှာစာပေးခြင်းဖြင့် CFD ၏စျေးနှုန်းကိုသင်မှန်းဆနေသည်။ သင်ရောင်းရန်မှာစာကိုသင်ထားလျှင်၊ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ဤသည်ကိုသင်အွန်လိုင်းစတော့ရှယ်ယာတိုလိမ့်မယ်ဘယ်လို!
ဒါကြောင့်ယခုသင်ဟာ CFD ပွဲစားကိုအရောင်းအ ၀ ယ်အတိုများသို့အရောင်းအ ၀ ယ်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်းသင်သိပြီဆိုလျှင်၎င်းသည်လက်တွေ့တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြကြပါစို့။
ရှင်းလင်းဖို့, ရောင်းရန်အမိန့်အားဖြင့်, သင်ရှယ်ယာတန်ဖိုးကျလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းသင်၏ပွဲစားပြောပြနေကြသည်။ သူတို့လုပ်ရင်အမြတ်ရတယ်။ တကယ်လို့သူတို့တကယ်တက်သွားမယ်ဆိုရင်သင်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်သင်ဟာ Ford Motor သိုလှောင်မှုကိုတိုတောင်းချင်နေတယ်ဆိုပါစို့။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ချိန်တွင်ရှယ်ယာများကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈.၀၃ ရှိသည်။ ယခုအခါ Ford ၏အစုရှယ်ယာများသည် CFD ကိရိယာများကိုအမှန်တကယ်မထောက်ပံ့သောကြောင့်အပြည့်အ ၀ ရောင်းရန်မလိုပါ။ မင်းအစားပွဲစားရဲ့အနည်းဆုံးအစုရှယ်ယာတန်ဖိုးကိုရောက်နေသရွေ့တော့သင်ဟာနည်းနည်း (သို့) သင်ကြိုက်သလောက်ရောင်းဝယ်နိုင်ပါတယ်။
Ford Motors ရှယ်ယာများတန်ဖိုးကျဆင်းသွားခြင်းအတွက် စုစုပေါင်းဒေါ်လာ 500 ကို သင် ရှယ်ယာရယူလိုပါသည်။
ထို့ကြောင့် သင်သည် $500 တန်ဖိုးရှိသော ရောင်းရန်အမိန့်ကို ချမှတ်ပါ။
ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် Ford Motors သည် $6.70 ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် 16.5% ကျဆင်းသွားသည်။
သင့်ရှယ်ယာ $500 တွင်၊ သင်သည် စုစုပေါင်းအမြတ် $82.50 ရခဲ့သည်။
သို့သော်သင်၏တိုတောင်းသောအရောင်းရဆုံးဟောကိန်းများသည်အမြဲတမ်းမှန်ကန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့် Ford Motors ၏ရှယ်ယာတန်ဖိုးများတိုးလာပါကမည်သို့ဖြစ်လာမည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
တစ်ဖန် သင်သည် Ford Motors တွင် ဒေါ်လာ 500 ဖြင့် စတင်ရောင်းချသည့်စျေးနှုန်းမှာ $8.03 ဖြင့် ရောင်းချရန် အမိန့်ချပါသည်။
အရှိန်အဟုန်သည် သင့်အပေါ် ရွေ့လျားနေပြီး ရှယ်ယာများသည် တစ်ခုလျှင် $9.01 တန်နေပြီဖြစ်သည်။
၎င်းသည် 12.20% တိုးလာသည်။
သင်သည် ဤဈေးကွက်တွင် တိုတောင်းသွားသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ တိုးလာခြင်းသည် ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေသည်။
စုစုပေါင်းအစုရှယ်ယာ $500 တွင်၊ သင်သည် $61 ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
အသေးစိတ်ရှင်းပြပြီးနောက်တိုတောင်းသောအရောင်းအ ၀ ယ်အားဖြင့်တိုတောင်းသောအရောင်းအဝယ်ဖြစ်သောအခါသင်၏အလားအလာရှိသောဆုံးရှုံးမှုများကိုသင်ကန့်သတ်နိုင်သည်။
CFDs များနှင့် ပတ်သက်၍ အထက်ပါကဏ္များကို အခြေခံ၍ ဖြစ်နိုင်ချေများသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်ရှယ်ယာ CFD များသည်၎င်းတို့ခြေရာခံနေသောအမှန်တကယ်သို့မဟုတ်ကျောထောက်နောက်ခံပြုခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သင့်အားမတူကွဲပြားသောစတော့စျေးကွက်များသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။
တိုတောင်းသောရောင်းသူများကို ဦး တည်လိုသည့်အရောင်းရဆုံးစျေးကွက်များထဲမှလူကြိုက်အများဆုံးစျေးကွက်အချို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ထိုအရာများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောစတော့ရှယ်ယာ CFD ပွဲစားများကသင့်အားအောက်ပါစျေးကွက်အချို့သို့လည်းသင့်အားဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည် -
ဟောင်ကောင် လဲလှယ်ရေးနှင့် ရှင်းလင်းရေး။
ယေဘူယျအားဖြင့် CFD တူရိယာများမှတဆင့်တိုတောင်းသောအရောင်းအ ၀ ယ်သည်အမြတ်အစွန်းရရှိရန်အခွင့်အလမ်းများစွာကိုပေးသည်။
ဤအပိုင်းသည်အလားအလာအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်တိုတောင်းသောအရောင်းအ ၀ ယ်များသည်ရိုးရာသဘောအရရှယ်ယာများ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောအခါသင်မကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်အခကြေးငွေများကိုဆွဲဆောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤနေ့ချင်းညချင်း ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၏ ရှေ့ဆုံးတွင်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို မရောက်ခင် ကော်မရှင်နဲ့ အကျုံးဝင်ရအောင် န့်.
သင်တစ် ဦး ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ အွန်လိုင်းကုန်သွယ် သင်တစ် ဦး ကော်မရှင်ပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ဝယ်ယူမှုသို့မဟုတ်ရောင်းချမှုအမှာစာတိုင်းပြုလုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဖွင့်လှစ်သည့်အခါနှင့်သင်ပိတ်သည့်အချိန်တွင်သင်သည်ကော်မရှင်ကိုနှစ်ကြိမ်ပေးချေရန်လိုအပ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ရွေးချယ်ထားသောပွဲစားက ကော်မရှင်ခ 0.3% ပေးသည်ဆိုပါစို့။
သင်သည် Nike စတော့များပေါ်တွင် $1,000 ရောင်းရန်အမှာစာတင်ထားသည်။
ပွဲစားက သင့်အား ၃ ဒေါ်လာပေးသည်။
Nike စတော့ရှယ်ယာများသည် $900 သို့ကျဆင်းသွားသောအခါတွင် သင်သည် ဝယ်ယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင်၏အမြတ်ငွေများကို ငွေရှင်းရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၎င်းသည် ကုန်သွယ်မှုကို ပိတ်လိုက်သော်လည်း သင်သည် ကော်မရှင်၏ 0.3% ကို ထပ်မံပေးဆောင်ရန် လိုအပ်သည် - $2.70 ဖြစ်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်၊ သင်၏ Nike လက်တိုအရောင်းအ၀ယ်အတွက် စုစုပေါင်းကော်မရှင်သည် သင့်အား $5.70 ကုန်ကျသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်း၌ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသော CFD ပွဲစားတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုသည့်အခါကော်မရှင်မပေးနိုင်ပါ။ အဲဒီအစား, သင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်ပြန့်ပွားခြင်းနှင့်နေ့ချင်းညချင်းငွေကြေးအခကြေးငွေသာ။
အဆိုပါပျံ့နှံ့ရိုးရှင်းစွာသင်ရွေးချယ်ထားသောစတော့ရှယ်ယာ CFD ၏ဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းစျေးနှုန်းအကြားကွာဟချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်နဲ့တွက်ဖို့အကောင်းဆုံးပါပဲ၊ ဒါကသင့်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ပဲလုပ်ဖို့ဘယ်လောက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုအကဲဖြတ်ဖို့ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် HSBC ရှယ်ယာများကို အတိုချုံးလုပ်ချင်သည်။
သင့်ပွဲစားက ရောင်းဈေး 20.73p ပေးသည်။
သင့်ပွဲစားက ဝယ်ဈေး 20.77p ပေးသည်။
ပျံ့နှံ့မှု 0.2% တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ သင်၏အရောင်းအ၀ယ်ကာလတိုကို ဖွင့်လိုက်သောအခါတွင် သင်သည် အနီရောင်တွင် 0.2% ချက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် HSBC ရှယ်ယာများသည် အနည်းဆုံး 0.2% ကျဆင်းသွားမှသာ အမြတ်အစွန်းဇုန်တွင် ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသော CFD ပွဲစားအများစုသည်တင်းကျပ်သောပြန့်နှံ့မှုကိုကမ်းလှမ်းကြသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏စတော့ရှယ်ယာတိုတောင်းသောစျေးနှုန်းများကိုအနိမ့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
ဒီအထူးအခကြေးငွေသင်တိုတောင်းသောအခါသင်ရှောင်ရှားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သောအရာတစ်ခုခုသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်သင်၏တိုတောင်းသောအရောင်းရဆုံးနေရာကိုနေ့တိုင်းဖွင့်ထားရန်သင်ကသင်ပေးရမည့်အဖိုးအခဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်လဲ? ကောင်းပြီ, သင်အွန်လိုင်းသိုလှောင်မှုတိုတောင်းရန် CFDs ကိုသုံးပါလိမ့်မယ် - နှင့် CFDs '' သြဇာ '' ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။
သင် (အငြင်းပွားမှုအပေါ်ကုန်သွယ်) သြဇာလျှောက်ထားကြသည်မဟုတ်ရင်တောင်, ဒီနေဆဲကိစ္စတွင်နေဆဲဖြစ်သည်။ သင်သိသည်အတိုင်း, သြဇာထုတ်ကုန်အတိုးနှုန်းနှင့်အတူလာ - ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မူတည်။ ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကအပေါ်ယံလွှာကသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးအကျိုးအမြတ်ကိုစားလိမ့်မယ်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်သင်တစ် ဦး မှတဆင့်တိုတောင်းတဲ့ရောင်းဖို့ဖြစ်လျှင် တစ်ရက်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာသင်သည်မည်သည့်အခကြေးငွေပေးစရာမလိုပါ။ သို့သော်စျေးကွက်နီးကပ်လာသည့်အချိန်နှင့်သင်၌ CFD အနေအထားဖွင့်လှစ်ထားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏ရာထူးမှနုတ်ယူလိမ့်မည်။
နေ့ချင်းညချင်း ဘဏ္ဍာငွေ အမှန်တကယ် ကုန်ကျစရိတ် မည်မျှ ကုန်ကျသည် ဟူသော သတ်မှတ်ချက် အရ - ၎င်းသည် နောက်ဆုံးတွင် သင်ရွေးချယ်ထားသော ပွဲစားအပေါ် မူတည်ပါသည်။ သတင်းကောင်းကတော့ သင်ထင်ထားသလောက် မကြာမကြာဖြစ်နေပါတယ်။ တကယ်တော့၊ အချို့သော CFD ပွဲစားများသည် အစုရှယ်ယာများအတွက် နေ့ချင်းညချင်း ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို 3-5% ကြားတွင် ပေးဆောင်ပါသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် သင်သည် နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးနှုန်းထက် ပိုလုပ်ထားသရွေ့ သင်၏ရောင်းအားတိုသောအနေအထားကို 12 လကြာအောင် ထားနိုင်သည်။
ဤမေးခွန်းအတွက်အတိုချုပ်အဖြေမရှိပါ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မည်သည့်သိုလှောင်ရန်လိုအပ်သည်ကိုဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်စဉ်သည်နည်းပညာနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်သိကောင်းသိနိုင်မည်ဖြစ်သည်မှာ၊
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အခိုးအငွေ့ရှင်းလင်းစေရန်, အောက်တွင်ငါတို့တိုတောင်းသော - ရောင်းရန်အခွင့်အလမ်းများမှသင်ပြုနိုင်သောအရာအချို့ကိုစာရင်းပြုစုပါပြီ။
ဤသည်ဝေးတိုအားဖြင့်အရောင်းရဆုံးထံမှအမြတ်အစွန်းဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့အဲဒါဟာသာမန်အသိဥာဏ်နဲ့အရေးတကြီးကိစ္စပဲ။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်အခြေခံကျသောသုတေသနသည်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းပုံသဏ္aာန်သည်စတော့ရှယ်ယာတစ်ခု၏တန်ဖိုးကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ပြီးနောက်တွင်စတော့စျေးနှုန်းသည် ၀ ယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားနှုန်းအရတက်တက်သွားသည်။ ဤ ၀ ယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားသည်စတော့ရှယ်ယာများမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုဖြစ်စေသည်သို့မဟုတ်အနာဂတ်တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ဥပမာအမေဇုံသည်သုံးလတစ်ကြိမ်ရလဒ်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ မျှော်မှန်းထားသည်ထက်များစွာသာလွန်သည်။ စျေးကွက်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်လို့ခင်ဗျားထင်သလဲ ဒါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုသတင်းတွေနောက်မှာ Amazon အစုရှယ်ယာတွေကို ၀ ယ်ဖို့အားပေးမယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ စတော့စျေးနှုန်းကိုတက်ဖို့ပါ။
Inovio Pharmaceuticals မှနောက်ဆုံးပေါ် COV-19 ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှုကို FDA ကရပ်ဆိုင်းထားကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်ဆိုပါစို့။ ဒါဟာအစုရှယ်ယာရှင်တွေကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားစေနိုင်တယ်၊ ရလဒ်အနေဖြင့်၎င်းသည်အစုရှယ်ယာများအပေါ်ရောင်းရန်အမိန့်ကို ၀ င်ရန်အလွန်ကောင်းသည့်အခွင့်အလမ်းပင်။ သို့သော်သင်၏အလားအလာရှိသောအမြတ်အစွန်းကိုအမြတ်ထုတ်ရန်သင်လျင်မြန်စွာလိုအပ်သည်။
သာမာန်အားဖြင့်, လိမ္မာပါးနပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်လျှော့စျေးဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်တန်ဖိုးမထားသည့်စတော့များကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ သို့သော်တိုတောင်းသောရောင်းသူတစ် ဦး အနေနှင့်, သင်ပြောင်းပြန်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာတန်ဖိုးအလွန်ကြီးသောစတော့တစ်ခုကိုသင်ရှာရန်လိုအပ်သည်။ သင်လုပ်နိုင်လျှင်၎င်းသည်စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းမှအမြတ်အစွန်းရရန်အရောင်းအ ၀ ယ်အနေအထားသို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဒါပေမဲ့မင်းဒါကိုဘယ်လိုလုပ်သလဲ ကောင်းပြီ၊ စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုလုံးအလွန်အမင်းတန်ဖိုးမထား၊ တန်ဖိုးနိမ့်ခြင်းရှိမရှိလေ့လာသူများအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာစာရင်းကိုင်အချိုးကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအချက်၏ရှေ့တန်းမှ P / E အချိုးသည်။
P / E အချိုး
ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ၀ င်ငွေအချိုး (P / E) အချိုးသည်ကုမ္ပဏီ၏လက်ရှိစတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းကိုရှယ်ယာတစ် ဦး ချင်းဝင်ငွေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ အမြတ်အစွန်းရရန်သင်လည်ပတ်နေသည့်စုစုပေါင်းရှယ်ယာအရေအတွက်ကိုကုမ္ပဏီ၏နှစ်စဉ်အမြတ်အစွန်းသို့ခွဲရန်လိုအပ်သည်။
သင်ရှယ်ယာတစ်စုလျှင် ၀ င်ငွေရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကိုလက်ရှိစတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းသို့ခွဲရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကအချိုးပေးမယ်။ အခုတော့သင်ဟာဒီအချိုးကိုစက်မှုပျှမ်းမျှနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖို့လိုတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ကြည့်နေတယ်ဆိုပါစို့ GlaxoSmithKline လက်ကျန်များ။ အကယ်၍ ၎င်းတွင် P/E အချိုး 17 ပါရှိသော်လည်း ဆေးဝါးစတော့ရှယ်ယာများအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းပျှမ်းမျှသည် 12 ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် တန်ဖိုးလွန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့် - ကောင်းသောရောင်းချမှုအခွင့်အလမ်းကို တင်ပြပါ။
နှိုင်းယှဉ်ခွန်အားညွှန်းကိန်း (RSI) သည်ရေတိုရောင်းချသူများအားလုံးနီးပါးအသုံးပြုသည့်အလွန်လူကြိုက်များသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာဤညွှန်ကိန်းသည်စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုလုံးကိုဝယ်ယူသောအခါသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံရောင်းချခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြရန်အလားအလာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယခင်ဖြစ်ခဲ့လျှင် RSI သည်ကာလတိုပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ရန်အလားအလာရှိကြောင်း RSI ကညွှန်ပြလိမ့်မည်။
ထိုသို့ဖြစ်ပါကဤသည်ကသင့်အားစတော့ရှယ်ယာပေါ်တွင်ရောင်းရန်အမှာစာရေးရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ RSI ၏အထွေထွေစည်းမျဉ်းသည်ညွှန်ကိန်းသည် ၇၀/၁၀၀ ကိုချိုးဖောက်ပါက၎င်းသည်ဝယ်ယူသောနယ်မြေတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ညွှန်ကိန်းသည် ၃၀/၁၀၀ အောက်တွင်ရှိပါကစတော့ရှယ်ယာများသည်အလွန်အမင်းရောင်းစားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
Short Squeeze ဆိုတာဘာလဲ။
သငျသညျ '' တိုတောင်းသောညှစ် '' ဟူသောဝေါဟာရကိုဖြတ်ပြီးတွေ့ခဲ့ရသော်လည်းအမှန်တကယ်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုမသိပါ။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုရည်ညွှန်းတယ် စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှု စတော့ရှယ်ယာတစ်ခု၏။ ပို၍ တိကျစွာပြောရလျှင်စတော့ဈေးကွက်၏တန်ဖိုးသည်အလွန်လျင်မြန်စွာအထက်သို့သွားသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်တိုတောင်းတဲ့ရောင်းသူတွေကိုသူတို့ရာထူးကနေထွက်ပြီး ၀ ယ်သူအမှာစာမှာထားတယ်။ အထက်ပါလမ်းကြောင်းကိုလိုက်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဤအချက်သည်စကားပြောရန်အတွက်ဒိုမီနိုပုံစံအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်အတွက်စတော့စျေးနှုန်းကိုပိုမိုမြန်ဆန်သောနှုန်းဖြင့်တိုးမြှင့်ရန်တွန်းအားပေးသည်။
သင်စတော့ရှယ်ယာတိုတောင်းသည့်အခါ Stop-Loss အမိန့်
Stop-loss အော်ဒါများသည်ကုန်သွယ်မှုအားလုံးတွင်စတော့တင်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအကြံပြုသောအရာဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်သူတို့ကသင့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုတိကျတဲ့စျေးနှုန်းတစ်ခုမှာလျှော့ချဖို့သင့်ကိုခွင့်ပြုတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပါစို့သင်က Alphabet stock များကိုတိုစေလိုသော်လည်းသင်၏ရှယ်ယာ ၁၀% ထက် ပို၍ မဆုံးရှုံးလိုပါ။ ထို့ကြောင့်၊ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသင်၏ ၀ င်ငွေစျေးနှုန်းထက် ၁၀% ပိုမိုသောစျေးနှုန်းဖြင့် Stop-loss order ကိုသတ်မှတ်သည်။
Alphabet စတော့ရှယ်ယာများကို တစ်ခုလျှင် $1,500 စျေးနှုန်းဖြင့် ဆိုကြပါစို့။
၎င်းတို့ကို တန်ဖိုးကြီးသည်ဟု သင်ထင်သောကြောင့် ရောင်းရန်အမှာစာတစ်ခုတင်လိုက်ပါသည်။
သင့်ရှယ်ယာ၏ 10% ထက်ပို၍ မဆုံးရှုံးချင်ပါ။
ထို့ကြောင့် သင်သည် သင်၏ stop-loss အမိန့်ကို $1,650 ဖြင့် သတ်မှတ်သည်။
သင့်အရောင်းအ၀ယ် တိုတောင်းခြင်း မှားယွင်းပါက - Alphabet စတော့ရှယ်ယာများ တိုးလာသည်ဟု ဆိုလိုရင်း၊ စျေးနှုန်း $1,650 သို့ ရောက်ပါက သင့်ကုန်သွယ်မှုသည် အလိုအလျောက် ပိတ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်နည်းပြောရလျှင်အက္ခရာအစုရှယ်ယာ ၂၀% တိုးလာလျှင်ပင် (ရောင်းရန်အမိန့်အတွက် ၂၀% ဆုံးရှုံးမှုရှိသည်)၊ သင်ရပ်တန့်ပြီးဆုံးရှုံးမှုကိုရပ်ဆိုင်းထားသည့်အတွက် ၁၀% ကျော်ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မှတ်သားပါ၊ Stop-loss order များသည်ဘယ်သောအခါမျှ ၁၀၀% စျေးကွက်နှင့်ကိုက်ညီရန်အာမခံချက်မရှိပါ။
၎င်းသည်ရှားပါးသော်လည်းစျေးကွက်အခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုတွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဤသို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာသင်၏ပွဲစားနှင့်အတူ 'အာမခံထားသော' stop-loss order ကိုထားခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဤသည်များသောအားဖြင့်သင့်အားကော်မရှင်အတွက်အနည်းငယ်ပိုကုန်ကျမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျိန်းသေကျိုးနပ်ပါသည်။
ဒါကြောင့်ယခုသင်စတော့ရှယ်ယာတိုတောင်းဖို့ဘယ်လို၏အကောင်းနှင့်အထွက်သိပြီ, ငါတို့ယခုဤနှင့်အတူလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပွဲစားများဆွေးနွေးရန်သွားနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်တစ်လျှောက်လုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အတိုင်းအောက်ဖော်ပြပါအကြံပြုထားသောပွဲစားများအားလုံးသည် CFD တူရိယာများကိုအထူးပြုသည်။ ၎င်းသည်သင်ပလက်ဖောင်းကမ်းလှမ်းထားသောစတော့ရှယ်ယာတစ်ခုစီတိုင်းကိုတိုတောင်းနိုင်သည်ကိုသေချာစေသည်။
၄။ AVATrade - ယုံကြည်စိတ်ချရသောအွန်လိုင်း CFD ပွဲစားအခကြေးငွေနည်းခြင်း
AVATrade သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပရိသတ်များစွာအသုံးပြုသောအွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပွဲစားသည် tier-one လိုင်စင်များစွာပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးအလေ့အထများကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ရန်ပုံငွေသည်အချိန်တိုင်းလုံခြုံစိတ်ချရသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ AVATrade သည်အမှန်တကယ်ထင်ရှားသည့်နေရာတွင်၎င်းသည်စတော့ရှယ်ယာများ၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ ETFs၊ ရွေးချယ်စရာများ၊
ထပ်မံ၍ ၎င်း၏ထိပ်တန်းအရောင်းအ ၀ ယ် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်မှကမ်းလှမ်းသောစတော့ရှယ်ယာ CFD များအားလုံးတိုတောင်းနိုင်သည်။ AVATrade သည် CFD နေရာတွင်အကောင်းဆုံးပြန့်ပွားမှုအချို့ကိုသင်တွေ့ရှိကြောင်းသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ငွေပေးချေခြင်းများအားလုံးသည်အခကြေးငွေပေးစရာမလိုပါ။ သင်သည်ဤပွဲစားနှင့်တိုတောင်းသောအရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်သင်သည်သင်၏အကောင့်ထဲသို့ဒေါ်လာ ၁၀၀ သာထည့်ရန်လိုအပ်သည်။
Capital.com သည်တိုတောင်းသောအရောင်းအ ၀ ယ်များအတွက်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည်သင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ရုံဖြင့်သင်ဝင်ရောက်နိုင်သောစတော့အိတ်ချိန်းအမြောက်အများကိုပေးထားသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်၊ သင်သည်အမေရိကန်၊ ယူကေ၊ ဂျပန်၊ အီတလီ၊ နော်ဝေး၊ ပြင်သစ်၊
မည်သည့်စတော့အိတ်ချိန်းကိုသင်ပစ်မှတ်ထားသည်မှာအရေးမကြီးပါ၊ အကြောင်းမှာ Capital.com သည် ၁၀၀% ကော်မရှင်ကြေးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကုန်သွယ်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချရန်အလွန်ကောင်းမွန်သော၎င်း၏ရှယ်ယာ CFDs များအပေါ်တင်းကျပ်စွာပြန့်ပွားမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ သင်၏ Capital.com အကောင့်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတွက်လည်းအခကြေးငွေမလိုပါ။
အကယ်၍ သင်သည် အစုရှယ်ယာငယ်များဖြင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် ရှာဖွေနေပါက Capital.com သည် ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ စတင်ရန် သင်သည် အနည်းဆုံး အပ်ငွေ £/$ 20 ကို ပြည့်မီရန် လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးမှာ၊ သင်သည် ငွေများကို ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ် သို့မဟုတ် e-wallet ဖြင့် ချက်ချင်းငွေသွင်းနိုင်သည်။ ဤယုံကြည်စိတ်ချရသော CFD ပလပ်ဖောင်းကို FCA၊ CySEC၊ ASIC နှင့် NBRB တို့မှ စီမံထားသည်။
သို့သော်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အထိရှေ့သို့မြန်မြန်သွားနိုင်ပြီးမည်သူမဆိုသည် CFD ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု၍ စတော့ရှယ်ယာတိုတောင်းနိုင်သည်။ အမှန်မှာ၊ သင်သည်ယနေ့ခေတ်တွင်သြဇာရှိသည့်စတော့ရှယ်ယာများကိုပင်တိုစေနိုင်သည် - ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
သင်အွန်လိုင်းစတော့များကိုတိုစေလိုပါကသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ CFD ပွဲစားနှင့်ဆက်သွယ်သည်။ သင်မည်သည့်စတော့ခ်တိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုလျောကျလိုကျကိုသိတယျဆိုရငျ၊
အကယ်၍ သင်သည်စတော့ရှယ်ယာများကိုတိုတောင်းရန်ရှာဖွေနေပါကသင်အလွန်တန်ဖိုးထားသည်ဟုသင်ယုံကြည်သောကုမ္ပဏီများကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ထပ်နည်းဗျူဟာတစ်ခုမှာဘဏ္newsာရေးသတင်းကိုစောင့်ကြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ အပျက်သဘောဆောင်သောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကွဲထွက်သွားပါက၎င်းသည်သူ၏စတော့များကိုတိုတောင်းနိုင်သည်။
သင်၏ရွေးချယ်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုသော CFD ပွဲစားတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုပါကသင်သည်တိုတောင်းသောသိုလှောင်မှုအတွက်မည်သည့်ကော်မရှင်မဆိုပေးဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ CFDs များကိုသင်အရောင်းအဝယ်လုပ်နေစဉ်တွင်သင်၏ရာထူးကိုဆက်လက်ထားရှိရန်နေ့ချင်းညချင်းငွေကြေးအခကြေးငွေပေးရလိမ့်မည်။